Laamaha amniga oo sheegay ineey baaris kuwadaan ragii shalay 9 qof kudilay.. | gobolada.com
Hay’addaha ammaanka dowladda Federalka Somaliya ayaa sheegay inay wadaan baaritaanka ku aadan cidii ka dambeysay dil wadareed shalay duhurkii loo gaystay dad ka shaqeynaayay hawlo nadaafadeed.
Dadkaan ayaa la sheegay inay la shaqeynayeen Hay’ad, islamarkaana inta u dhaxeysa Lafoole & Xaawo Cabdi hawlo nadaafadeed ay ka wadeen, balse dabley hubaysan ay dileen.
Wasiirka Amniga Somaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale & Taliyaha Ciidamada Booliska Somaliya oo arrintaan kulan deg deg ah ka yeeshay ayaa sheegay inuu socdo baaritaan xoog leh oo lagu ogaanayo dambiilayaashii falkaasi gaystay.
Jeneraal C/laahi Xasan Bariise madaxa Xafiiska Warbaahinta ee Ciidanka Booliska Somaliya oo la hadlay Warbaahinta ayaa sheegay inay socoto baaritaanka la xiriira dhacdada dadkaasi shacabka ah lagu laayay, waxaana uu ku tilmaamay dadka arintaasi gaystay kuwa dhibaatada ku haayo umadda Somaliyed.
“Dadka dhibaatada umadda Somaliyed ku haayo, ay ku dileen Shaqaale u shaqeynaayay Hay’ad Ukrain lagu magacaabo oo nadiifinaayay inta u dhaxeysa Xaawo Cabdi & Ceelasha Biyaha, shaqaalahaasi waxa uu ka koobnaa 38 qof, waxaa meesha ku dhintay 8 qof, qof kalena gadaal ayuu ka dhintay, arrintaasi markii ay na soo gaartay baaris deg deg ah ayaan bilownay, maydadka waxaa la geeyay isbitaalada, dhaawac ma jiro, waxaa socdo baaris deg deg ah oo ku aadan dhagar qabayaasha dhacdadaasi gaystay.” Ayuu yiri Jeneraal Bariise.
Illaa hadda ma cadda dadka ka dambeeyay dilkaasi loo gaystay dadka shacabka ah ee lagu xasuuqay inta u dhaxeysa deeganada Xaawo Cabdi & Lafoole ee duleedka dhanka Koonfureed ee Magaalada Muqdisho.